बच्चा देखि बुढा सम्मका ब्यक्तीलाई धेरै रिसाउने बानी छ भने हृदयघातको खतरा ! डाक्टर सापको यस्तो छ सुझाव – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/बच्चा देखि बुढा सम्मका ब्यक्तीलाई धेरै रिसाउने बानी छ भने हृदयघातको खतरा ! डाक्टर सापको यस्तो छ सुझाव
बच्चा देखि बुढा सम्मका ब्यक्तीलाई धेरै रिसाउने बानी छ भने हृदयघातको खतरा ! डाक्टर सापको यस्तो छ सुझाव
रिस उठ्नु एक स्वस्थ्य र अस्वस्थ्य दुवै मानिसहरुको लागी खतरा हो । किनभने रिसले तपाई , परिवार , समाज र काममा समेत ठुलो समस्या निम्त्याउछ । त्यसैगरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मतिष्क र मुटुमा असर पर्ने भएकाले हृदयघातको खतरा हुन्छ । आज हामी तपाईलाई कसरी धेरै रिसाउने व्यक्तिलाई हृदयघातको खतरा हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गदै छौ । डा. ओम मूर्ति अनुसार रिसले स्वास्थ्यमा धेरै बेफाइदा पुयाउने बताउछन् । किनभने उनको जीवनमा रिसले पारेको नकरात्मक प्रभावको बारेमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोष्ट गरेका छन् ।